कुन–कुन संवैधानिक निकायमा कति पद रिक्त? « Deshko News
कुन–कुन संवैधानिक निकायमा कति पद रिक्त?
थारू र मधेसी आयोगमा एक/एक जना अध्यक्षमात्र छन्। बाँकी चार/चार सदस्य रिक्त छन्। थारू आयोगमा विष्णुप्रसाद चौधरी र मधेसी आयोगमा विजयकुमार दत्त अध्यक्ष छन्। अध्यक्षले मात्र यी आयोगको काम गर्दै आएका छन्। कान्तिपुर दैनिकबाट